Myanmar Mobile App - Home | Facebook
See more of Myanmar Mobile App on Facebook
547,344 people like this
546,615 people follow this
+959794 555888
Eastern iT and Mobile
Myanmar ICT Directory
စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းများ Application
Android စမတ်ဖုန်းများအတွက် အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းများ Application | Myanmar Mobile App
Home Download Android App Android စမတ်ဖုန်းများအတွက် အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းများ Application DownloadAndroid AppAndroid စမတ်ဖုန်းများအတွက် အသုံးပြုပုံနည်း.....
Myanmar Mobile App shared MMAS Phone,Spareparts & Gadget's post — feeling excited at MMAS Phone,Spareparts & Gadget.
· 13 hrs · Mandale, Myanmar ·
Mi Advance သင်တန်းတက်ပြီး 💦သင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရအောင် 😇။ ဆရာဦးမောင်နိုင် 👤(မာမိုဘိုင်း)ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။(၂-၄-၁၈)မှ(၆-၄-၁၈)ရက်နေ့ထိ (၅)ရက် Xiaomi Advance သင်တန်းကို မန္တလေး @MMAS Center တွင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီဗျ။ 📲09797248488, 0991033134 သို့ အသေးစိတ်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
MMAS Phone,Spareparts & Gadget
မန္တလေးမြို့တွင် ဆရာဦးမောင်နိုင် သင်ကြားမည့် Xiaomi Advance ရက်တိုသင်တန်း (ဧပြီ ၂ ရက်နေ့)
ဖုန်းပြုပြင်ခြင်း Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံရှိပြီးသူများ ၊ လက်တွေ့လ...ုပ်ငန်းခွင်တွင်လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ic အဖြုတ်အတပ်သာသင်မယ့် Course မဟုတ်ပါ။ စက်နိုးခြင်း theory,လမ်းကြောင်းပိုင်း theory များကို သင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အပိုင်းဖြစ်ရင်ဘာကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာမျိုး solution တွေသင်မှာပါ။ ခေါင်းစားခြင်းခံနိုင်ရပါမည်။
ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့စမည်။
Double CPU Type အကြောင်း
DDR-Voltage V တွေကဘာတွေလဲ
Converter Feedback တွေအကြောင်း
mi အများစုက supply နိုးလို့အဆင်မပြေဘူး
Fuel gauge ic လေးကထောက်နိုးလို့
ရတာ သိကြပြီလား 😁 😁
Haredware ဇာတ်လိုက်ကျော် I2c
တချို့ဖုန်းတွေမှာ I2c က စက်နိုးပြီးမှလိုပါတယ်
တချို့ ဖုန်းတွေက I2c လမ်းကြောင်းဆုံး မှစက်နိုးပါတယ်
အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအတွက်…"Xiaomi Solution မန်း" သင်တန်းကကြိုဆိုပါတယ် 😁 😁 😁
၅ ရက်တာရက်တို Xiaomi Solution မန်း
HONOR 4X တို့ဖြစ်ပါတယ်
Redmi day မှာတော့
Redmi Note2,Redmi Note3,Redmi Note4
Mi day မှာတော့
Mi 5, Mi5S, Mi5S plus,
Mi Max,Mi Mix,Mi Note
ဆရာဦးမောင်နိုင် (Mar Mobile) ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပြသပေးမှာပါ။
အခြေခံရှိပြီးသားသူတွေအတွက် ဒီ ၅ ရက်အတွင်းမှာ လုံးဝပြောင်းလဲလာပါမယ်။ Basic ပိုင်းမှာလိုက်နိုင်ရင်တော့မတတ်မှာမပူပါနဲ့ ။ ကြိုးစားမူတော့လိုပါလိမ့်မယ်။
သင်တန်းကြေးက ၁ သိန်း ၂ သောင်းပါ။
#MIခေတ်ကြီးမှာ Service ခေတ်နောက်မကျအောင်လို့
ကျေးဇူးပြု၍ Computer လေးပါယူခဲ့ကြပါ။ အဝေးကလူများ တစ်ရက်ကြိုလာပေးပါ။
တက်ရောက်မည့်သူများ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၉၇၂၄၈၄၈၈ သို့ဆက်သွယ်စာရင်းပေးနိုင်ပါပြီ။ လူဦးရေကန့်သတ်ထားသဖြင့် တက်ရောက်မှာသေချာမည့်သူများ စာရင်းကြိုတင်ပေးသွင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
MMAS မိုဘိုင်းဖုန်းအပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ၊ ဖုန်းပြုပြင်ရေး နှင့် သင်တန်းကျောင်း
၀၉၉၁၀၃၃၁၃၄ ၊ ၀၉၇၉၇၂၄၈၄၈၈
အွန်လိုင်းမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ အတိုကောက် စာလုံးတွေဟာ အဓိပ္ပါယ်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အများက အသုံးပြုနေတဲ့ ဒီလို အတိုကောက်စာလုံးလေးတွေကို ကိုယ်က အဓိပ္ပါယ်မသိဘူးမဖြစ်ရလေအောင် လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ - LoL = Laugh out Loud , OMG = Oh My God စတဲ့ စလုံးတွေပုံစံမျိုးပေါ့။ (Zawgyi Version) Ref : Youtube Aung Ko Htet (MMA) #aungkohtet_mma အှနျလိုငျးမှာ အသုံးပွုနတေဲ့ အတိုကောကျ စာလုံးတှဟော အဓိပ်ပါယျကိုယျစီရှိကွပါတယျ။ အမြားက အသုံးပွုနတေဲ့ ဒီလို အတိုကောကျစာလုံးလေးတှကေို ကိုယျက အဓိပ်ပါယျမသိဘူးမဖွဈရလအေောငျ လလေ့ာထားသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ - LoL = Laugh out Loud , OMG = Oh My God စတဲ့ စလုံးတှပေုံစံမြိုးပေါ့။ (Unicode Version) Ref : Youtube Aung Ko Htet (MMA)
SCR Pro For Android(Rooted&Non-Rooted) =================================== Screen Video Recorder လေးပါ။မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုယ်ပြသခြင်တဲ့apps&gamesတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်errorsဖြေရှင်းနည်း လေးတွေကို videoလေးနဲ့ပြန်လည်ရှင်းပြလို့ရတဲ့appလေးပါ။အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ SCR Pro versionကို၂ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။တခုကတော့ Lollipop Versionသီးသန့်အတွက်ဖြစ်ပြီးနောက်တခုကတော့ ကျန်တဲ့versionsတွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။မိမိရဲ့ဖုန်းဟာ Rooted or Non-root user၂ခုစလုံးအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။Rooted userတွေအတွက်ကတော့ featuresတွေအပြည့်အဝအသုံးပြုခွင်ရြမှာဖြစ်ပါတယ်။အသံ video quality တွေကိုအဆင်ပြေသလိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျား။အောက်ကလင့်ခ်တွင်ဒေါင်းလော့ရယူနိူင်ပါပြီ----->>>>>http://www.myanmarmobileapp.com/2015/07/06/scr-pro-for-androidrootednon-rooted/
Apple Event.! Live (iPhone7& More)